मुख्य मन्त्रीको ओखलढुंगा भ्रमण गलत भनेर मैले भनेकाे छैन : नेता गौतम - www.visionfm.org
सांसद गुरुङको प्रश्न : के मुख्यमन्त्री चप्पल पड्काउँदै झोला बोकेर आउनु पर्ने हो ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २९, २०७५ समय: ४:४४:२१
ओखलढुंगा-ओखलढुंगाका नेकपा नेता बाबुराम गौतमले आफ्नो नाम जोडिएर मुख्यमन्त्रीको भ्रमणका विषयमा समाचार आएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै नेता गौतमले केही सञ्चारमाध्यममा मुख्य मन्त्रीको ओखलढुंगा भ्रमण गलत भन्ने अर्थमा आएको समाचारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि मुख्यमन्त्री जिल्लामा आउनु स्वागत योग्य रहेको भएपनि आफुलाई त्यो विषयमा जानकारी नै नभएको तर सञ्चारमाध्यममा आफ्नो धारणा विपरितको समाचार आएको उनको दावी छ । मुख्य मन्त्रीसँगको सम्बन्ध विगारेर आफुलाई फसाउन स्रोतमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको भन्दै नेता गौतमले दुःख व्यक्त गरेका छन् । उल्लेख गरेको स्रोत नै गलत भएको दावी गरेका गौतमले भ्रामक समाचारले मुख्यमन्त्रीको सम्मानमा पर्न गएको चोटप्रति क्षमायाचना गरेका छन् ।
यस्तो छ नेता गौतमको स्ट्याटस् :-
हेलि चढेर सोरुम उदघाटन
भन्ने शीर्षकमा मिति 2075 माघ 28 सोमबार अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार ले सर्बसाधारण मा भ्रम पैदा भएको देखिएकोले मेरो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक मार्फत गर्न चाहान्छु।
ज्ञ० पहिलो कुरा म ओखलढुंगा बासी नागरिक हुनुको नाताले त्याहा खुल्ने सानातिना देखि ठुलो उध्योग ले जिल्लाको बिकासमा योगदान पुग्छ भन्ने स्पष्ट मान्यतामा म दृढ़ छु। यश कारण ओखलढुंगा को भुभागमा एउटा कम्पनी ले आधिकारिक डिलर खोलेर राम्रो काम को सुरुवात गरेको मा म त्याहा डिलर लैजान प्रयत्न गर्ने जोसुकैलाई मेरो सुभकामना छ र रहिरहने छ ।
द्द० दोस्रो कुरा यो मात्रै होइन आगामी दिन मा देश भरको कुनै पनि नागरिक ले ओखलढुंगा मा ल्याउने उद्योग लाई मेरो हृदय देखि सहयोग रहने छ । किनभने जिल्लामा आउने हर उद्योगले कमबेसी स्थानीयलाई रोजगारी ल्याउछन भन्ने मलाई राम्रो जानकारी छ । म बिगत मा एउटा ट्रेड युनियन को केन्द्रिय भुमिकामा रहि काम गरिसकेको ब्यक्ति हुनाले व्यावसायिक मर्म र भाबनाको राम्रो जानकारी मलाई भएको स्पष्ट पार्न चाहान्छु।
घ० तेस्रो कुरा हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता एबम ज्ञ नम्बर प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्री शेरधन राई ज्युको ओखलढुंगा भ्रमण बारेमा मेरो ब्यक्तिगत बिरोध हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । अझ म त उहाँ ओखलढुंगा जिल्लामा यति धेरै माया गरि आइरहदा हृदय देखि हर्शित छु। र उहाँ को स्वागत मा सदा तत्पर छु। उहाँ को आगमन ले जिल्ला को बिकासमा टेवा पुग्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मत रहिआएको छ ।
द्ध० चौथो कुरा पत्रकार शिव ढुङ्गाना सङ्ग मेरो छोटो फोनबार्ता भएको ठिक साचो हो। तर आसय , अभिव्यक्ति अनि नियति बिच तादम्यता देखिएन मात्रै होइन पुरै तोडमरोड भएको पाइयो । खासमा मलाई त्यस दिन मुख्य मन्त्री ज्यु ले महिन्द्रा सोरुम उदघाटन गरनु भएको जानकारी नै थिएन । त्यो कम्पनी हाम्रै नेकपा का मित्रहरूले खोल्नु भएको त झनै थाहा थिएन । मलाई त्यस सोरुम को विपक्षमा लाग्नु पर्ने कुनै कारण पनि थिएन । अनावश्यक म मुख्य मन्त्री ज्यु को विपक्षमा बोल्नु पर्ने कारण पनि थिएन र छैन। अनि मुख्य मन्त्री ज्यु सङ्ग आजको मिति सम्म जति पटक भेठ भयो र बातचित भयो कुनै दिन नराम्रो म र उहाँ बाट भएको मलाई थाहा छैन । हामी दुई मा म उहाँको असल कार्यकर्ता र उहाँ मेरो असल नेता को सम्बन्ध अहिलेसम्म छ भन्ने कुरामा म दृढ़ छु। यी सब हुँदा हुदै यो मिस भएको छ जस्ले म स्वयंलाई दुखी बनाएको छ । एसले मुख्य मन्त्री ज्यु लाई पुगेको चोट प्रति म क्षमा चाहान्छु। अनि पार्टीको एउटा इमानदार कार्यकर्तालाई फसाउने नियत राखेर समाचार प्रकाशित गर्ने पत्रकार भाइ शिव ढुङ्गाना प्रति दया जागेको छ ।
छ० पाचौ कुरा म नेकपा को असल कार्यकर्ता बन्न प्रयत्नशील ब्यक्ति हुनुको नाताले मेरो आदरणीय नेताहरु ले राम्रो काम गरून् भन्ने चाहना राखेको छु। त्यस अर्थमा मुख्य मन्त्री ज्यु ले राम्रो काम गरे मेरो पनि उचाई बढने र प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्दा मेरो पनि उचाइ घटने भएको ले राम्रो होस भन्ने सदिच्छा राख्नु मेरो परम कर्तव्य हो भन्ने मेरो आज सम्म को बुझाइ छ । मेरो त्यही सामान्य बुझाइ लाई तोडमरोड सहित यो समाचार आएकोले मलाइ दुखी तुल्याएको छ ।
ट० अन्तमा सामान्य सैद्धान्तिक विषयलाई कोही कसैले नियतबस ब्यापार गर्नु अपराध हो भन्ने ठम्याइ मेरो रहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छु। मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्न कतिपनी सजिलो काम होइन । ओखलढुंगा जस्तो जिल्लामा बसेर सङ्घर्सरत भाइ शिव ढुङ्गाना प्रति पनि मेरो कुनै पुर्बाग्रह नरहेको स्पष्ट पार्न चाहान्छु। तर सामान्य बिसयमा असामान्य ब्यापार नगर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
सांसद गुरुङको प्रश्न : के मुख्यमन्त्री चप्पल पड्काउँदै झोला बोकेर आउनु पर्ने हाे ?
सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले ओखलढुंगाको विकासका लागि भएको मुख्यमन्त्रीको भ्रमणका बिषयमा अनावश्यक टिप्प्णी नगर्न आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई रुम्जाटारमा निर्माणहुने स्मार्ट सिटि र पत्ताले क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधारको अध्ययानका लागि आएको र सोही अवसरमा शोरुम पनि उद्घाटन गरेको विषयलाई केही सञ्चारमाध्यमले फरक ढंगले बुझेको भन्दै सांसद गुरुङ असल नियतले गरिएका काममा खराब टिप्प्णी नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘रुम्जटारमा करोडौंको लागतमा स्मार्ट सिटि बन्दैछ । माथिल्लो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनको काम हुँदैछ । मुख्यमन्त्री ज्यू त्यसको अध्ययान सहितको कार्यक्रम लिएर आउनुभएको हो ।’ सांसद गुरुङले भने,‘शोरुम उद्घाटन पनि मुख्यमन्त्रीबाट गरियो । महेन्द्र कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आग्रह ग¥यो । हेलिकप्टर रिजर्भ उसैले गरेको हो । अनेकौं व्यस्तता छोडेर ओखलढुंगा आउनु भएका मुख्यमन्त्री हेलिमा नआएर के चप्पल पड्काउँदै झोला बोकेर आउनु पर्ने हो र ? अनि मुख्यमन्त्री आउँदा जिल्लालाइ फाइदा हुन्छ कि घाटा ? ’ अहिले सम्म यस क्षेत्रमा खुल्न नसकेका उद्योगहरु सञ्चालनमा आउनु स्वागत योग्य रहेकाे उनको भनाई छ । सांसद गुरुङले चुनावी बाचा अनुसार युवाहरुलाई उद्यमशिलतमा सहयोग गरेर जिल्लामै रोजगारीको व्यवस्था गर्न आफुले अभियान नै थालेको सुनाए । मुख्यमन्त्री राई ओखलढुंगाको विकासका लागि सकारात्मक रहेकाले जिल्लाबाट सिफारीस भएका सबैजसो योजना स्विकृत हुने गरेको सांसद गुरुङको दावी छ । सांसद गुरुङले नियोजित र प्रायोजित समाचार लेखेर चरित्र हत्या गर्ने विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
आईतबार मुख्यमन्त्री राई ओखलढुंगा आएका थिए । पत्ताले हुँदै रुम्जाटार आएका राईले प्राविधिकहरु र स्थानीयसँग रुम्जाटार स्मार्ट सिटिको विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले रुम्जाटार अटो मोवाईल्स प्रा.लि. ले सञ्चालन गरेको महेन्द्र शोरुमको उद्घाटन पनि गरेका थिए । मुख्य मन्त्री राईले युवाहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धन र उद्यमशिलतालाई आफुले सम्मान गर्ने प्रदेश सरकारले साथ दिने भएकाले आफु नीजि कम्पनीको शोरुम उद्घाटनमा आएको कार्यक्रममै धारणा राखेको थिए । उनले नीजि क्षेत्रको भूमिका बिन विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको समेत बताउँदै उद्योगधन्दामा लाग्न युवाहरुलाई आवहन गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीकाे साेही भ्रमण गलत भएकाे भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा समाचार आएकाे थियाे ।